आज घट्यो अमेरिकी डलरसहित धेरै देशको विनियमदर, हेर्नुहोस् कुन देशको कति पुग्यो ? – Nepal Insider
इटहरीमा एक परिवारमा पर्यो ब’ज्रपात, एकै दिन दाजु बहिनीको मृ’त्यु
मेरो ममिलाइ बचाइदिनुहोस् उहाँ बिना हामी कस्को साहाराले बाँच्ने ? आमालाई के आइलाग्यो यस्तो !
अझै बढी स्टाइलिस बन्यो पल्सर २२० एफ, यस्तो हुनेछ फिचर
भारतमा बनेको कोरोनाविरुद्धको खोप प्राप्त गर्ने पहिलो मुलुक नेपाल हुनेछ
यी युवती टिकटकमा यस्तो हर्क’त गरे पछि भिडियो भयो भाइरल [हेर्नुहोस भिडियो]
मुख्य पृष्ठ /समाचार/आज घट्यो अमेरिकी डलरसहित धेरै देशको विनियमदर, हेर्नुहोस् कुन देशको कति पुग्यो ?
आज घट्यो अमेरिकी डलरसहित धेरै देशको विनियमदर, हेर्नुहोस् कुन देशको कति पुग्यो ?
काठमाडौँ, बैशाख २०-आज शनिबार अमेरिकी डलरसहित धेरै विदेशी मुद्राको भाउ ओरालो लागेको छ । त्यस्तै आज आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११९ रुपैयाँ ८८ पैसा तथा बिक्रिदर १२० रुपैया ४८ पैसा पुगेको छ।
भने आज मलेसियन रिँगिट एकको खरिददर २७ रुपैयाँ ८९ पैसा तथा बिक्रिदर २८ रुपैयाँ ३ पैसा रहेको छ। त्यस्तैगरी आज कुवेती दिनार एकको खरिददर ३८७ रुपैयाँ ७९ पैसा तथा बिक्रिदर ३८९ रुपैयाँ ७३ पैसा रहेको छ। भने आज युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १५० रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रिदर १ सय ५१ रुपैयाँ ३३ पैसा रहेको छ।
त्यस्तै आज शनिबार कतारी रियाल एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ ७१ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ ८७ पैसा रहेको छ। भने आज बहराईन दिनार एकको खरिददर ३१७ रुपैयाँ ७ पैसा तथा बिक्रिदर ३१८ रुपैयाँ ६६ पैसा रहेको छ।
त्यस्तैगरी आज साउदी रियाल एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ ९१ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ ७ पैसा रहेको छ। भनजे आज यूरोपियन यूरो एकको खरिददर १३१ रुपैयाँ ६७ पैसा तथा बिक्रिदर १ सय ३२ रुपैयाँ ३३ पैसा रहेको छ। आज युएई दिराम एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ ६४ पैसा छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ ८० पैसा रहेको छ।
अब शुल्क तिरेर पिसिआर परीक्षण गर्न पाइने, एक जनाको १५ हजार
शास्त्र भन्छ – बिहिबार यी कार्य गर्नु हुदैन, अशुभ हुन्छ
उपत्यका कोरो’नाको हट’स्पटः भक्तपुरमा मात्र १० संक्र’मितको मृ’त्यु
नायक जयकिसन बस्नेतले लकडाउन भरि २०० जनालाई खाना खुवाउने